The Porn ငြင်းခုံမှု၏အဆုံး? (၂၀၁၁) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ဦးနှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုတိုင်းတာရန် Tools များကဒီမှာရှိပါတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာပြconcernsနာများနှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသည့်စစ်တမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကတိုးတက်နေသလား။ ဖြစ်ပေါ်စေသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု အန္တရာယ်မကင်းလိင်မှဦးဆောင်? ရိုးရှင်းစွာအပိုပြီးအဆင်ပြေပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လူအားဖွင့်? Inflating မတရားသော အသစ်အဆန်းနှင့်အစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်? အိမ်ထောင်ဖက်ကိုသဘောမကျတဲ့ပြaနာတစ်ခုပဲ။ နုပျိုကြည့်ရှုသူလျော့ကျလာ အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်မှဆွဲဆောင်မှု နှင့် တိုးမြှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်?
လူတိုင်းကသူ၏ရှုမြင်ပုံကိုယုံကြည်ကြသည် - များသောအားဖြင့်၎င်းသည် 'သက်သေပြရန်' စစ်တမ်းများကိုညွှန်းနိုင်သည်။ သို့သော်အငြင်းပွားဖွယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုအခြားကစားကွင်းသို့ပြောင်းပြီးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း ခက်သိပ္ပံ?
သတင်းကောင်း။ non-ထိုးဖောက်ရေးကိရိယာများယခုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်သို့ဂုဏျရညျတူများအတွက်တည်ရှိ။ အဆိုပါနည်းစနစ်ပြီးသားရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, overeaters ၏ဦးနှောက်ဆနျးစစျဖို့ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ, အင်တာနက်ကိုစွဲနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမဟုတ်ရင်ကျန်းမာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များအညီအမျှအရေးကွီး၏။ အသုံးပြုသူများသည်ပြဿနာနေသောလက္ခဏာများသင်ယူအသိပေးရွေးချယ်မှုစေနိုင်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းပိုကောင်းလူငယ်ကာကှယျနှင့်ပညာပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်,
ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တွင် ဦး နှောက်သုတေသီများဘာရှာဖွေနေကြမည်နည်း။
သုတေသီများကရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ဦးနှောက်အပေါ်ရည်ရွယ်ချက်စမ်းသပ်မှုများစွာ running ပြီးခဲ့သည့်ရှစ်နှစ်နေခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာအလွန်အကျွံလောင်းကစားအဆိုပါဖြစ်စေသောရှာဖွေတွေ့ရှိ တူညီတဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ as ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကို 'disorder' မှလာမည့်လာမည့် 'စွဲလမ်းမှု' သို့ခွဲခြားခြင်းပြုသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, DSM-5 ။
လောင်းကစားခြင်းကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်လောင်းကစားခြင်းသည်ရောဂါစွဲခြင်းကိုဘိန်းဖြူအပ်များနှင့်ပိုက်များအက်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသူများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သို့သော်ဓာတုဗေဒနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအလွန်ဆင်တူသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဓာတုဗေဒတွေကမလုပ်ပါဘူး ဖန်တီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဝတ္ထုဖြစ်စဉ်များ; သူတို့မျှသာရှိပြီးသားလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ကျသွားသည်။
ကိုကင်း, နီကိုတင်းနှင့်လောင်းကစားအသုံးပြုသူတစ်ဦးမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောခံစားမိပေမယ့်သူတို့ကအတူတူပင်ဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်းနှင့်ယန္တရားများမျှဝေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးအကျိုးကိုဆားကစ်၏အချက်အချာအတွက် dopamine တိုးမြှင့်ခြင်း, နျူကလိယ accumbens ။ သေချာဖြစ်စေရန်, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုမကြာခဏသဘာဝကဆုလာဘ်မအဆိပ်အတောက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုအထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့် meth အဖြစ်အချို့ကို၏ရုတ်တရက်လွှတ်ပေးစေ နောက်ထပ် ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်ကြိုးအပြုအမူတွေထက် dopamine ။ သင်တို့မူကားကိုမောင်းသို့မဟုတ်ပြေးရတာ, ဤအရာအလုံးစုံလမ်းများရှိမရှိ နိုင် ရောမမြို့မှဦးဆောင်လမ်းပြ။
အချို့လူများကမူ“ စွဲလမ်းမှု” ကို“ စိတ်အားထက်သန်မှု” နှင့်အတူဂေါက်သီးသို့မဟုတ်လိင်ကိုစွဲမက်ခြင်းကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးစေသည်။ လူတစ် ဦး မှဆွဲဆောင်မှုရှိသောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို“ စွဲလမ်းစေ” သည်ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသည်ဟုသူတို့ထင်မြင်ကြသည် အဘယ်သူမျှမ လှုပ်ရှားမှုများစွဲလမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် 'စွဲလမ်းမှု' ဆိုသည်မှာထိုကဲ့သို့သောဆင်ခြင်တုံတရား၏ကရုဏာကြောင့် amorphous concept မဟုတ်တော့ပါ။ သုံးယောက်ရှိပြီးသား စွဲလမ်း၏ defining ဝိသေသလက္ခဏာများ ဖွစျနိုငျ ဦးနှောက်အတွက်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျတိုင်းတာ။ ထိုမှတပါး, သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုနှင့်ပင် သွေးစစ်ဆေးမှု, ဦးနှောက် Scan ဖတ်၏နှောင့်ရှက်ခြင်းမရှိဘဲ, ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို၏ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးသည်မှတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
Numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု: အခြားအပြောင်းအလဲများတွင် dopamine (D2) receptors သည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ကျဆင်းသွားပြီးစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသော dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ/တ္ထုများအတွက် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" ။ ထို့နောက်စွဲ လျစ်လျူရှုလေ့ အကျိုးစီးပွား, လှုံ့ဆော်မှု, မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်စပ်မှု၏တစ်ချိန်ကခဲ့အပြုအမူတွေ။
အသိ: Dopamine (the gotta get it!) အာရုံကြောဓာတု) သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်စွဲလမ်းသူများ၏ဘ ၀ ၌အခြားလုပ်ဆောင်မှုများထက်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။ ဒါ့အပြင် ΔFosB, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းကူညီပေးသည်တဲ့ပရိုတိန်း, key ကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်စုပုံနိုင်သည်။
Hypofrontality: တိုကျရိုကျ-ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး မီးခိုးရောင်ကိစ္စ နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အကျိုးဆက်များကိုကြိုမြင်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးကိုလျှော့ချ, ကျဆင်းခြင်း functioning ။
လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမည်ဝါသည်မည်မျှပင်စိတ်အားထက်သန်ပါစေဤ“ ခက်ခဲသောကြိုး” အပြောင်းအလဲများမဖြစ်ပေါ်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ဆန္ဒအလျောက်ရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသော ဦး နှောက်မှထိန်းချုပ်မှုမရှိသော၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူဖြစ်သည်။
သုံးယောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီထပ်တလဲလဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ဦးနှောက်အတွက်တက်ပြသခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကသိပ္ပံပညာရှင်များအားကြီးသောကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားများ၏ဦးနှောက်ဆနျးစစျဖို့စတင်ပါပြီ။ အထောက်အထားသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ ပစ္စည်းဥစ္စာ-စွဲတူသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ နှင့် တွေကိုမှ sensitivity ကိုတဖနျအလုပျမှာစွဲဖြစ်စဉ်များကိုညွှန်း။ အလားတူဖြစ်ရပ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ overeaters.
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် porn လောင်းကစားဝိုင်းလေ့လာနေနှင့်မနေကြသနည်း
ယနေ့ထိတိုင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသောနှိုင်းယှဉ်။ စျေးသိပ်မကြီးသောပုံရိပ်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောညစ်ညမ်းသူများ၏ ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများမရှိသေးပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုသူများကိုစည်းကမ်းမကျသည့် ဦး နှောက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့်အကြောင်းတစ်ခုမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အသစ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ static porn သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများဖြင့်မျက်စိတမှိတ်အတွင်းကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်သည်။ သုတေသနသည်လက်တွေ့တွင်နောက်ကွယ်၌အမြဲရှိနေသည်။
နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကလူ porn သို့မဟုတ် junk အစားအစာများကဲ့သို့သဘာဝကဆုလာဘ်မှစွဲလမ်းသို့ချော်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်, တိုးပွားလာ Extreme, ဒါမှမဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ရရှိနိုင်မှုကြာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သာမကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းမိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအစွဲဖြစ်စဉ်များအကြံပြုကြောင်းလက္ခဏာတွေဝေဖန်ခံရစတင်ပါပြီကျန်းမာဦးနှောက်အတွက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်: အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်တိုး, ခံစားချက်အပြောင်းအလဲစိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းမှတင်းမာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing, ဒါကြောင့်ထွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်။ အတော်များများကအသုံးအင်တာနက်ကို erotica ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို-သာရောဂါလက္ခဏာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်သတိထားဖြစ်လာခဲ့သည်။
porn အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာဖို့စိန်ခေါ်နေသည်တစ်ဦးကတတိယအကြောင်းပြချက်အကြောင်းပြချက်ရှင်းပြဘို့ကထိန်းချုပ်အုပ်စုများကို set up ရန်ခက်ခဲကြောင်းဖြစ်ပါသည် တားမြစ်ထားလိင်သုတေသန: အဆိုပါ orgasm Cycle.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပညာသင်နှစ်နှင့်အခြားမြင့်မားမှတ်, sexologists-တတောင်းဆိုနေတာ, ဒါမှမဟုတ်ပို့ချယခုလိုအပ်သောခက်ခဲသိပ္ပံပညာတာဝန်ခံဦးတည်သွားစေရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအလွန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအသံကေဒါအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှခုခံရှိသေး၏။ တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ sexologist အားဖြင့်အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များစဉ်းစားပါ။ (သူ့မှတ်ချက်တွေတခြားနေရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသည်သူ၏ကြေညာချက်များမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကိုကြာရှည်တယ်လို့စေ။ )
“ လိင်စွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆသည်သိပ္ပံပညာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များဖြစ်သည်။ လုံးဝနီးပါး sexology ၏လယ်ပြင်၌ဤအယူအဆကိုမယုံဘူး။
သူကသူ့ခံယူချက်မှာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသနပါမောက္ခတစ် ဦး ကမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းကိုအကြောင်းကြားသောအခါ အီတလီဆရာဝန်များ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလူပျိုတို့အတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်မေး:
ဤကဲ့သို့သောခှငျ့ရှိသူနည်းစနစ်န်းကျင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆွေးနွေးငြင်းခုံဘောင် ပုံစံ လှုံ့ဆော်မှု ("လိင်") ၏, နှင့်လိင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်။ အငြင်းပွားမှုအဖြစ်ရှုမြင်။ တကယ်တော့သို့သော်အရေးကြီးသောပြissueနာဖြစ်နိုင်သည် ဒီဂရီ အာရုံကြောဓာတုဆွ၏။ စစ်ဆေးသူများသည်အန္တရာယ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ World of Warcraft ၏နာရီပေါင်းများစွာသေကြေပျက်စီး မုဆိုးစုဆောင်းသောအစားအစာများသည်အဝလွန်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယနေ့စျေးပေါသောအုန်းသီးအစားအစာများသည် ၀ ယ်ယူရန်ကူညီပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည် အမေရိကန်လူမျိုး 79% ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဆီ။ အဖေရဲ့အငြိမ် Playboy တော်တော်လေးဗလာရှိ၏ superstimulating အစဉ်တ္ထုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုးကျိုးများအတွက်မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ (Porn၊ ထို့နောက် & ယခုကြည့်ပါ).
လိင်ပညာရှင်များစွာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ပုံမှန်နှိုးဆွခြင်း) ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း (ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှု) နှင့်တူညီကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံပြုန်းတမ်းလာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည် 'ပုံမှန်' ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ထူးခြားသော, စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များလျော့နည်းပြင်းထန်သောအပျော်အပါးကနေသူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမှေးမှိန်နေကြသနည်း အမှန်တကယ်စွဲလမ်းနေသောကြောင့်လိင်မှုကိစ္စလွတ်လပ်ခွင့်သည်အစဉ်အမြဲတိုးပွားစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဦး နှောက်နှင့်မည်သို့ဆင်တူသနည်း။
တစ်နေ့တွင်ဤသြဇာညောင်းသောကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်အဖွဲ့သည်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ထဲ၌ဘာတွေဖြစ်နေသည်၊ သို့မဟုတ်မဟုတ်ကြောင်းအတိအကျဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုနောက်ကွယ်တွင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းသောတိုးတက်မှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားရသူများနှင့်အတူသူတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလျော့နည်းလာသည်။
သမားရိုးကျကျန်းမာရေးပညာရှင်များမှတစ်ဆင့်မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကကျွန်ုပ်၏ ED ကိုညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းသည်စစ်မှန်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်မပြုချင်ကြပါ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ငါလေးနက်သောနံနက်ခင်းကိုရလာပြီ အလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲဆိုတာသိရခြင်းကလန်းဆန်းစေသည်။
ဒါဟာအဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်ဒါအဆိုးငါ့အသက်ကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးထိခိုက်သော [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း] အဘို့အတက်ကပ် ______ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကြားနာဒေါက်တာများ၏အကြိုက် ______, လိင်ကုထုံး ______ နှင့် Kinsey သုတေသီရရှိသွားတဲ့။ ထိုကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူများကအားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီစောငျ့ရှောကျဖို့ဆိုခြေလှမ်းများယူဘယ်တော့မှထားပါတယ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း [လေးတွေ] ခုခံကာကွယ်ကြည့်ဖို့ဆီးရီးယားနဲ့အစ်စဖြစ်ပါတယ်။ ငါမဆိုတည်ရှိနေပါလျှင်တစ်နေ့နေ့မှာဒီလူတွေအဖြစ်ကောင်းစွာ, [erotica ထုတ်လုပ်သူမှ] သူတို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသစ္စာများအတွက်တာဝန်ခံကျင်းပကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အတိတ် 40 နှစ်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းအတွက်လိုလားတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသဘောထားပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်မဲ့များ၏အဆင့်ကိုချဉ်းကပ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏တပြင်လုံးကိုအစဉ်အဆက်ကဒီဒဏ်ဍာရီများက warped ပါပြီ။ တိုးမြှင့် porn အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းပြီးနောက်ပြန်သာမန်ဖို့လအတွင်းငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ DSM သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအထူးဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ လာမည့် DSM သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုaအစီအစဉ်ပျက်သောမဟုတ်တစ်ခုစွဲ။ ဒီတဆယ်ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ် Labels:, ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်:
ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်ယခုတစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်သော၊ တစ်ခါတစ်ရံမခံနိုင်သော၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးနှစ် Uni ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တာနဲ့ (ကျွန်တော့်ဘာသာရပ်အားလုံးတော်တော်များများအောင်မြင်ခဲ့တယ်)၊ အခုတော့သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်ပဲလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်ပြီ။ ငါနေဆဲအိမ်မှာနေတုန်းပဲ, ဒါကြောင့်ငါ့မိဘတွေတကယ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဒီစိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားတယ်၊ သူကစာသားအတိုင်း ၁၀ မိနစ် (ဒေါ်လာ ၂၈၀) နဲ့ငါ့ကို BIPOLAR TYPE 10 လို့သိပြီးဆေးပြားအကြောင်းစပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသော / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ကိုပြောပြသော်လည်းသူကကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်မည်သည့်သက်ရောက်မှုမျိုးရှိမည်မဟုတ်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကစာပေးစာယူ၌ DSM အသစ်၏နောက်ကွယ်ရှိစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကလူနာသည်ပုံမှန်ဖြစ်လျှင်သူသည်လှုံ့ဆော်မှုမည်မျှပြင်းထန်သည်သို့မဟုတ်မည်မျှအကြိမ်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းခြင်းကိုမရရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကချိတ်ဆက်မိလျှင်၎င်းမှာသူ၌အခြားပြissuesနာများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ADHD၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
ဒီဆင်ခြင်ခြင်းမြို့ပတ်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ လူနာ၏ပုံမှန်ပုံပျက်နေသော ဦး နှောက်သည်အမြဲတမ်းအပြစ်ရှိသည်ဆိုလျှင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလမ်းခရီးကိုစဉ်း စား၍ မရပါ။ လူနာသည်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဟုယူဆပြီးစိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ဒီဂရီသည်မသက်ဆိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါ၊ အသုံးပြုသူများကနိဂုံးချုပ်ထားပါသည် ကြောင်းမိုးသည်းထန်စွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း တယောက်တည်း ယခင်အပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေ mirror ကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခင်းကျင်း၏သရုပ်အကြောင်းမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်ယနေ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများဖြင့်ချည်နှောင်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်နိုင်သောရောဂါလက္ခဏာမပြနိုင်သေးခင်စောင့်ရှောက်သူများသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုမသက်ဆိုင်သောရောဂါများ (စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများ၊ ED စသည်တို့) ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အာဏာရပါရာဒိုင်းနေသော်လည်းတစ်ပင်လယ်ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျော်ကြားတဲ့စွဲသုတေသီ အဲရစ် Nestler ပါရဂူဘွဲ့ says:
အလားတူ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်သဘာဝဆုကျေးဇူးများအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှုစသည့်အခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပွားသောအခြားရောဂါဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology ကိုကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သောအခြားသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပြင်သစ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးတွင်အင်တာနက် porn / cyber sex ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုကြသည်။လိင်စွဲ") နှင့်ပြည်နယ်များ ("ညစ်ညမ်းစွဲ: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်“) ။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သိသညျ့အတိုငျး၊ ဂျာမန်အသင်း။ အသုံးပြုသူများ၏ ဦး နှောက်အပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာရန်အဖွဲ့သည်သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပြproblemsနာများသည် (အသုံးပြုသူအသုံးပြုသည့် application အရေအတွက်နှင့်အတွေ့အကြုံ၏အတိုင်းအတာနှင့်တိုင်းတာ) လှုံ့ဆော်မှုအတိုင်းအတာနှင့်အလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောင့်နှင့်အတူမပတျသကျ, ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်ပင်။
လက်ရှိအခက်အခဲများရှိနေသော်လည်းယခုအခါသုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းမှုသည်သုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲနေသည်မဟုတ်သည်ကိုစုံစမ်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အခြားမည်သူမဆို The Porn Debate ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါသလား။